site na Admin na Jun-23-2020
Charmlite abanyela Canton Fair nke 127 mepere site na 15th, June wee gwụ na 24th, June. Ọ pụrụ iche ọfụma n’ihi na Canton Fair, nke a makwaara dị ka China Import and Export Fair, ka a bugara n’igwe ojii na nke izizi ya kemgbe mmalite ya n’afọ 63 gara aga. ...
site na nhazi na Mee-29-2020
Iko mmanya bụ nnukwu akụkụ nke ọdịbendị na ihe nkiri nke mmanya - otu n'ime ihe mbụ ị hụrụ banyere ezigbo ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ, ọkachasị nke ndị ọdịda anyanwụ - bụ iko dị na tebụl. O buru na enyi gi nye gi iko mmanya n’uzo gi eba oriri, ogbe iko o nyere ya…
Mgbụsị akwụkwọ Canton Fair & Hong Kong 2019 gosipụtara
site na Admin na Dec-25-2019
N’ọnwa Ọktoba 2019, Charmlite Co., ltd. gara ihe ngosi ahia abuo: Nleta 2019 nke mgbụsị akwụkwọ Canton Fair & Hongkong Global Sources Living Show. Ndị ahịa 581 sitere na mba 57 bịara leta ụlọ ntu anyị. ...
Otu izu iji gaa Thailand
site na Admin na Dec-20-2019
Charmlite nwere njem njem kwa afọ maka "nzukọ ezinụlọ". N’ọnwa Nọvemba afọ 2019, anyị gara Thailand ka anyị hụ ihe ọdịbendị Thai na omenala nke mba a dị omimi. Weta obere akpa gị buru akpa gị, ka anyị gaa ~ ...
2019 Sika Canton Fair
site na Admin na Jun-03-2019
Ikwu okwu ihu na ihu na-eme ka anyị nwekwuo nghọta. Ndị enyi ochie na-enwe obi ụtọ inwe mkparịta ụka mara mma mgbe ọtụtụ oge imekọ ihe ọnụ, ndị ahịa ọhụrụ nwere obi ụtọ ịhụ ndị enyi ọhụrụ nwere ezigbo ohere iji rụkọọ ọrụ. ...
Na-ajoụkọ oge ọnụ, na-ekerịtarịtara onwe anyị, ndụ ahụ dị ebube bụ ihe mkpali nye anyị ịnye ndị ọkachamara na ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị mma. ...